Margarekha » ओली समूहको प्रशिक्षण सुरु, कुन प्रदेशमा को नेता खटिए ?
ओली समूहको प्रशिक्षण सुरु, कुन प्रदेशमा को नेता खटिए ?
केपी शर्मा ओली समूहले सात वटै प्रदेशमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ । मंगलबार बसेको ओली समूहको बैठकले महाधिवेशन २०७८ मंसिर २ गते टुंगो लगाएसँगै आज सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्न लागेको हो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमका ओली समूह नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, मणिचन्द्र थापा र डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे तोकिएको छ भने प्रदेश नं २ मा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुलीकुमारी महतो जिम्‍मेवारी तोकिएको छ । पूर्वमाओवादी समूहका मणिचन्द्र थापा पछिल्‍लो समय ओली समूहमा लागेका हुन् ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी र पद्मा अर्याल छन् भने गण्डकी प्रदेशमा टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, किरण गुरूङ र सीता पौडेल तोकिएका छन् । पूर्वमाओवादी समूहका टोपबहादुर रायमाझी पनि पछिल्‍लो समय ओली समूहमा लागेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, मणिचन्द्र थापा र गोमा देवकोटालाई तोकिएको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कँडेल र सुजिता शाक्य खटिएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, कर्णबहादुर थापा र डा. विन्दा पाण्डे तोकिएका छन् । पूर्वमाओवादी समूहका लेखराज भट्ट पनि पछिल्‍लो समय ओली समूहमा लागेका हुन् ।